यिनै हुन् हिजो तिलोत्तमामा स’वारी दु’र्घटना’मा परी ज्या’न गु’माउने कलाकार पूजा गहतराज – Sidha Post 24
सवारी दुर्घटनामा परी बुटवलकी एक चर्चित नृत्य कलाकार’को ज्या’न ग’एको छ । सोमबार सांझ रुपन्देहीको तिलोत्तमामा भएको सवारी दु’र्घट’नामा नृ’त्य क’लाकार पुजा गहतराज’को मृ’त्यु भए’को हो ।
सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल –भैरहवा सडक अन्तर्गत ड्राइभरटोल नजि’कै बस’को ठ’क्क र’बाट स्कु’टरमा सवार २६ वर्षीया पूजाको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
भैरहवाबाट लु ३० प ८५६९ नम्बरको स्कुटरमा भैरहवाबाट घरतर्फ आउँदैगर्दा उनी दु’र्घट’नामा परेकी थिईन् । दु’र्घ’ट’नामा परी ग’म्भिर घा’इते भएकी गहतराको क्रिमशन अस्पतालमा उचारको क्रम’मा मृ’ त्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलले जनाएको छ ।
ठ क्क र दिने बस प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको र घ’टना’को अ’नुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । नृत्य कलाकार गहतराज २०१५ को नारायणी डान्सिङ स्टार उपाधी बिजयता हुनुका साथै बुटवलमा नृत्य प्रशिक्षककारुपमा क्रियाशिल थिईन् । गहतराज न्यू इन्भाराेमेन्ट कलेजमा नृत्य प्रशिक्षक समेत थिइन ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
बुटवलमा स्कुटी अनियन्त्रित भई प ल्टिदाँ एक जनाको मृ त्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका –९ मिलनचोकबाट बसपार्क तर्फ जाँदै गरेको लु ४४ प ६११६ नं. को स्कुटी मंगलबार आफै अ’नि’यन्त्रीत भई प’ल्टि’एको थियो ।
दु’र्घट’नामा प री तिलोत्तमा नगरपालिका–२ जानकीनगरकी २४ वर्षकी स्वोरा प्रधानको उपचारको क्रम’मा मृ त्यु भ’एको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता खड्क बहादुर खत्रीले बताए । उनको उपचारको क्रममा बिहीवार दिउँसो क्रिमशन अस्पतालमा मृ त्यु भए को हो । मृ त क प्रधान न्यू होराईजन कलेजमा एम.बि.एस. तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत रहेको कलेजले जनाएको छ ।
दु र्घट नामा परी ग म्भीर घाइ ते प्र धानको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुन नसेकेपछि मणिग्राम स्थित क्रिमशन अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । यस्तै दु र्घटनामा परी स्कुटी चालक जिल्ला शिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ का २६ वर्षीय सन्दिप श्रेष्ठ घाइते भएका छन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
म धेरै से”क्सी हुँदा तपाईंलाई के स’मस्या ?
नाग देवताको शक्तिले तपाइको फलिफाप हुने छ , देख्ने बित्तिकै ॐ लेख्ने होला
बैतडीमा जन्ती बोकेको जीप दु’र्घट’ना ५ जनाको मृ’त्यु
मिन्स (महिनावा,री) भएको बेला शा,री,रिक सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुदैन ?
काठमाडौंमा फ्ल्याट भाडामा लिएर यस्तो काम गराउने दुई महिला प’क्राउ